जानकारी Archives - Eall Nepal
अनियमित जीवनशैली र खराब खानपानका कारण एसिडिटी बढेर दुःख पाउनु आधुनिक जीवनशैली अपनाउने हामी सबैका लागि सामान्य कुरा हो । अमिलो पानी बढ्दा देखिने एकप्रकारको समस्यालाई एसिड रिफ्लक्स भनिन्छ । जब लोअर एसोफेगल स्पिंचर (एलईएस)ले ...
विवाहित पूरुषको लागि शीघ्रस्खलन निकै ठूलो समस्या हो । यसले दाम्पत्य जीवनमा पनि ठूलो असर पुर्याउँछ । मानिसहरु यस समस्याबाट मुक्ति पाउनको लागि महङ्गा तेलको प्रयोग गर्ने गर्छन् । जसको प्रयोगले समस्याको समाधान नहुन पनि ...
एजेन्सी। अस्ट्रेलियाकी एमिली डोवर नामकी यी बालिकाको उमेर मात्रै ५ वर्ष भयो । तर उनको शरीरका सबै अंगहरु जवान महिलाको जस्तै विकसित भइसकेका छन् । उनी दुई वर्षकी हुँदा नै उनका स्तनहरु बढ्न थालेका थिए ...
हिलालाई असाध्यै मनपर्ने यौन आसन यस्ता छन !श्रीमान श्रीमती बिच हुने यौन सम्पर्कले कस्लाई बढि यौन आनन्द भएको होला ? पुरुष यौन साथीलाई रमाइलो हुँदा आफलाई दुई गुणा रमाइलो भएको अनुभूति श्रीमती अर्थात प्रेमीकाको हुन्छ ...
वेस्टईन्डिजमा जारी क्यारेबियन प्रिमियर लिग अन्तर्गत नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप सम्मिलित भएको टिम एस टि किट्स एन्ड नेभिस प्याट्रोईट्स प्ले अफमा प्रवेश गरेको छ । आज सम्पन्न आफ्नो नवौ खेलमा जमैका टलवास विरुद्ध सात विकेटको ...
घरमा लहरा सजाउदै हो भने सावधान ! यस्ता गल्ति भुलेर पनि नगर्नुहोस
हामी प्राय जसो : हामी घर सजाउनको लागी घरको भित्तामा मनि प्लान्ट (Money Plant) वा अन्य लहरे फुल जस्ता विरुवाहरु राख्ने गर्दछौ । तर वास्तु शास्त्र अनुसार यसो गर्दा मानिसहरुका शत्रुहरु बढ्ने गर्दछन् । त्यसैले ...
कुन कुन रोगलाई फाइदा गर्छ त यौन सम्पर्कले, थाहा पाउनुहोस
एजेन्सी,। हाम्रो समाजमा मानिसहरु यौन सम्पर्क केवल आनन्द लिनका लागि गरिने ठान्छन् । तर धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ यौन सम्पर्क गर्दा विभिन्न रोगबाट समेत मुक्ति पाइन्छ अर्थात् फाइदा हुन्छ । आफ्नो आवश्यकता अनुसार नियमित वा ...
यसकारण दार्ही भएका केटाहरु नै केयसकारण दार्ही भएका केटाहरु नै केटीको पहिलो रोजाईमा पर्छन टीको पहिलो रोजाईमा पर्छन
युवतीहरुलाई इम्प्रेस पार्नका लागि केटाहरु हरेक प्रकारका कोशिसहरु गर्ने गर्छन् । तर, हालै गरिएको एक अनुसन्धानले केटीहरुलाई ट्रिम दारी भएका केटाहरुतर्फ आकर्षित हुने बताएको छ । युवतीहरुलाई इम्प्रेस पार्नका लागि केटाहरु हरेक प्रकारका कोशिसहरु गर्ने ...
पुरुषले गर्नुहोस यस्ता १० ब्यबहार महिलाले औधी मन पराउँछन
पुरुषले महिलाहरुलाई विभिन्न सपनाहरु बाँड्छन् अनावश्यक प्रसंगमा ढाँटेर प्रेम प्राप्तीको लालसा राख्छन् । अधिकांश पुरुषहरु ‘म तिम्रो लागि जे पनि गर्न सक्छु’ भन्नेसम्मका कुराहरु गर्न पछि पर्दैनन् । महिलाहरुलाई आर्कषित गर्न पुरुषहरुले ठूलाठुला भ्रमको खेती ...